३२ वर्षीय तेजश्वीको ६९ वर्षीय नितिश कुमारलाई चुनौती – Rapti Khabar
काठमाडौं, कात्तिक ११, भारतको बिहारमा बुधबारदेखि तीन चरणमा विधानसभा चुनाव सुरू हुँदैछ। यो चुनावले गत १५ वर्षदेखि मुख्यमन्त्री रहेका नितिश कुमारको भाग्यको फैसला गर्नेछ।
त्यसमाथि तेजश्वीले आफ्नो गठबन्धनले चुनाव जितेमा आफू नेतृत्वको सरकारले पहिलो निर्णयमै दस लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेका छन्।
भाजपा-जेडियुको सत्तारुढ गठबन्धनलाई चुनौती दिन तेजश्वीले बिहारमा कांग्रेस-आई र वामपन्थी पार्टीहरूसँग मिलेर ‘महागठबन्धन’ निर्माण गरेका छन्।
प्रियंका गान्धीसँग मिलेर उनले बिहारमा कठिन मानिएको कांग्रेस-आरजेडी गठबन्धन सम्भव तुल्याएका हुन्। २४०-सदस्यीय बिहार विधानसभामा कांग्रेस-आई ७० सिटमा, तेजश्वीको आरजेडी १४० सिट र बाँकी सिटमा वामपन्थी र साना दल लड्दैछन्। तेजश्वी सो गठबन्धका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार हुन्।
पछिल्लो पटक गरिएका मत सर्वेक्षणले बिहारमा अहिले पनि भाजपा र नितिश कुमारको गठबन्धनलाई अगाडि देखाएका छन्। ती सर्वेक्षणले नितिश कुमारको लोकप्रियता व्यापक रूपमा झरेको पनि देखाएका छन्।
तेजश्वी यादवप्रति युवाहरूको बढ्दो आकर्षणको एउटा कारण त्यसलाई पनि मानिएको छ।
तेजश्वी क्रिकेटका पूर्व खेलाडी हुन्। उनले कक्षा ९ पढ्दा पढ्दै औपचारिक शिक्षा छाडेका थिए। उनी कुनै समय झारखण्डको टिमबाट रन्जी ट्रफी खेल्ने गर्थे। उनी आइपिएलको सुरूआती चरणमा दिल्लीको टिममा पनि चुनिएका थिए। आइपिएल खेल्न भने उनले पाएनन्।
औपचारिक शिक्षा कम भएको र भ्रष्टाचारमा उनको परिवारको संलग्नताको विषयलाई लिएर भाजपाले तेजश्वीको आलोचना गर्ने गरेको छ। तेजश्वीका बाबु लालु सन् २०१८ देखि जेलमा छन्।
तेजश्वीले भने कैंयन खेलाडीको औपचारिक शिक्षा कम हुने गरेको र आफ्नो पनि त्यो बेला पढाइभन्दा खेलमा ध्यान गएको जवाफ दिने गरेका छन्।
उनका बुवा लालुले गरेको भ्रष्टाचारमा उनलाई पनि मुछ्ने गरिएकामा पनि तेजश्वीले जवाफ दिने गरेका छन्।
उनी उल्टै सोध्ने गर्छन्, ‘मेरो जुँगाको रेखी पनि नबसेको समयमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा मेरो आलोचना किन? म उप-मुख्यमन्त्री हुँदा कुनै भ्रष्टाचार गरेको भए त्यसमा कुरा गरौं न।’
बिहारका सडकहरूमा खाल्डा देखे आफूलाई खबर गर्न भन्दै तेजश्वीले सरकारमा भएका बेला आफ्नो ह्वाट्स एप नम्बर बाँडेका थिए। उनलाई त्यस्ता उजुर कति आए त थाह छैन, तर त्यो बेला २६ वर्षीय लक्का जवान तेजश्वीलाई आफूसँग बिहे गर्न भन्दै ४० हजार युवतीहरूले म्यासेज पठाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
छवि र शिल्पाको खटपटपछि छविलाई रेखा थापाको फोन, के भनिन रेखाले (हेर्नुस भिडियो)
काठमाडौँ । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफ्नो श्रीमान छविराज ओझा विरुद्ध एकाएक प्रहरीमा उजुरी गरेपछि माहोल गर्माएको थियो । तर आज बिहिबार निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरलेबिच महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा सहमति भएको छ । शिल्पाले घरेलु हिंसा भएको भन्दै काठमाण्डौ प्रहरी परिसरमा पति छविराज ओझा विरुद्ध उजुरी गरेकी थिइन् । छवि र शिल्पाले […]
आज २०७७ कात्तिक १२ गते बुधबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस